FBC - Warshaa simmintoo Birrii biliyoona 7.5 ijaaramuuf dhagaan bu’uuraa kaa’ame
Warshaa simmintoo Birrii biliyoona 7.5 ijaaramuuf dhagaan bu’uuraa kaa’ame
Finfinnee, Ebila 13, 2009 (FBC) Warshaa Simmintoo Waldaan Aksiyoona Misooma Industirii Abbaay baasii Birrii biliyoona 7.5niin ijaarsisuuf qondaaltonni Olaanoo fedaraalaa fi naannoo bakka argamanitti dhagaa bu’uuraa kaa’ame.
Naannoo Magaalaa Dajan bakka addaa gandoota Koonchar Saasanaraay fi Meenj Yabazaa jedhamanitti kan ijaaramu warshaan kun wayita xumuramu namoota 1, 690 carraa hojii dhaabbii fi yeroo ni-uuma jedhameera.
Pireezdaantiin Naannoo Amaaraa Obbo Gadduu Andaargaachoo dhagaa bu’uuraa kana wayita kaa’anitti akka jedhanitti warshichi ce’umsa misooma industirii saffisiisuun garasitti jijjiirama caasaa fiduu kan dandeessisudha.
Waldaan aksiyoonaa kun yeroo gabaabaa keessatti ofiisaa gurmeessuun warshaa simmintoo ijaaruuf lafa heektaara 250 garee sadaffaa irraa gama bilisa baasuun geggeessitoota naannoo waliin hojjachuusaa himaniiru.
Lafti heektaara 3, 600 oomisha mi’a dheedhii warshichaaf oolu sulula abbayyaadhaa kan eyyamameef yoota’u, hojiinsaa misooma naannichaa waliin wal-simee akka hojjatamuuf deggarsi barbaachisaa akka taasifamu ibsaniiru.
Ijaarsi warshichaas wggaa afuriif ji’a afur keessatti xumurama jedhamee eegama.
Kaleessa dhagaan bu’uuraa kan kaa’ameef warshaan kun ijaarsisaa wayita xumuramu guyyaatti simmintoo toonii kuma 5 akka oomishu gabaasi Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa ni-ibsa.
Oduuwwan Biroo « Ityoophiyaa fi Keeniyaan yaa’ii Beejiingirratti hirmaachufi	Manni marichaa itti gaafatamummaa Abbaa Taayitaa Misooma Gabaa jijjiire »